अशोक दर्जी र टंक बुढाथोकीले ३ करोड नेपालीलाई रुवाए ! यसरी नाचे Asok darji र AR Budathoki(भिडियो सहित) «
अशोक दर्जी र टंक बुढाथोकीले ३ करोड नेपालीलाई रुवाए ! यसरी नाचे Asok darji र AR Budathoki(भिडियो सहित)
Published : 27 September, 2019 5:46 pm
सानै उमेर बाटनै निकै चर्चा कमाउन सफल भएका भा’इरल वाल गायक अशोक दर्जीको स्वरमा ‘मन बिनाको धन ठुलो’ भाग २ ‘बा आमा’ बजारमा आएको छ । टंक बुढाथोकीको यु’टुब च्यानल मार्फत सो गीत सार्वजनिक गरिएको हो । उक्त गीत मा शब्द सङ्गीत टंक बुढाथोकीको रहेको छ ।
अशोक दर्जीको सर्वाधिक रुचाइएको पहिलो गीत ‘मन बिनाको धन ठुलो की धन बिनाको मन’ धेरैले मन पराएपछि भाग २ पनि वजारमा ल्याएको बुढाथोकीले जनाएका छन। अझै पनि त्यस्तै सामाजिक सन्देश दिने खालको शब्द र माहौल बने अर्को अँश पनि ल्याउने उनले बताए । अशोकको चर्चा सर्वाधिक भयो । अशोक दर्जिको दोस्रो गीत “आमा भन्दा राम्री कोही छैन संसारमा” पनि निकै नै लोकप्रिय गीत हो ।
उनले सो गीत वजारमा ल्याउन लागेको जानकारी यस अघि नै सामाजिक सं’जाल फे’सबुक मार्फत गराएका थिए। उनले अशोकको श्वरमा निकै निखार आएको पनि उनले बताए। मन विनाको धन ठूलो गाउँदा भन्दा अहिले निकै परिवर्तन भएको बताए। अशोकले पनि आफु मन विनाको धन ठूलो गीत मन पराइदिएका कारण आफु उत्साहित भएको बताए । भिडीयो यहाँ लिंकमा छ ।
एसिड आक्रमणमा परेकी नेपाली चेलीलाई बलिउडका कलाकारको साथ, भेट्न पुगे गायक राजु लामा…(हेर्नुहोस् भिडियो)
काठमाडौं – एसिड आक्रमणमा परेकी वीरगन्जकी किशोरी मुस्कान खातुनलाई बलिउड अभिनेता वरुण धवनले पठाएको भिडियो
गायक राजेश पायल राईको काठमाडौंको बानेश्वर स्थित घरमा आज आगलागी हुँदा राई भने नेपालमै थिएनन्
चलचित्र “रातो टिका निधारमा”को रिमेक भर्जनको शीर्ष गीतले दर्शक तथा श्रोताको मन जित्न सफल भएको